कति तापक्रम सम्म बाँच्छ कोरोना ?? वैज्ञानिकले पत्ता लगाए अर्को रोचक तथ्य – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/कति तापक्रम सम्म बाँच्छ कोरोना ?? वैज्ञानिकले पत्ता लगाए अर्को रोचक तथ्य
केही समय अघिसम्म मानिन्थ्यो कि जसरी तापक्रम बढ्दै जान्छ, कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रकोप अन्त्य भएर जान्छ । चीनको हुवेई प्रान्त (उहान शहर) मा सुरु भएको उक्त प्रकोपको केही समय त त्यही आशामै बितेको थियो । धेरै तापक्रम हुने देशहरुले त सुरुमा देशहरुले आफ्नो देशमा कोरोना भाइरसको संक्र` मण नफैलने दाबी गर्दै आएका थिए । हुन पनि अ धिकांश भाइरसहरु जाडोयाममा सक्रिय हुन्छन् ।
मौसम परिवर्तनको समयमायिनीको सक्रि`यता झनै बढ्छ ।तर, जति जति गर्मी बढ्दै जान्छ वा मौसम स्थिर हुँदै जान्छ, यी भाइरस क्रमशः नि`ष्क्रिय बन्दै जान्छन् । मौसमी रुघाखोकी, टाइफाइट लगायतका रोगका भाइरसको गुण प्रायः यस्तो हुन्छ । पछिल्लो समय वि श्वमा महा`मा `रीको रुप लिएको कोरोना भाइरस उच्च ताप`क्रममा पनि फैलने क्षमता राख्ने पुष्टि वैज्ञानिकहरुले गरेका छन् । फ्रान्समा वैज्ञानिकको एउटा समूहले गरेको शोधले यस्तो खुलासा गरेको हो । दक्षिणी फ्रान्सको आइएक्स मा`र्सीले विश्व`विद्यालयका प्रोफेसर बोरिस पास्टो`रिनोले आफ्नो साथीहरुसँग मिलेर यो भ्रमको अन्त्य गरेका हुन् । उनले यो भाइरसलाई ६० डि`ग्री से`ल्सीयस (१४० डिग्री फरेन`हाइट) तापमानमा परी`क्षण गरेका थिए ।
यो तापक्रममा १ घण्टा परीक्षण गरेपछि थाहा भयो कि भाइरस अझै पनि संक्र`मण फैलाउन सक्ष`म नै छ । अर्थात् यो तापक्रममा पनि भाइरस नि`ष्क्रिय हुन`सम्भव छैन । यो परीक्षणका लागि ती वैज्ञानिकहरुले अफ्रि`कामा पाइने एक जातको बाँदरको किड्नी`लाई यो भाइरसले संक्र`मित गरे । त्यसका लागि आइसोलेसनमा बसेका एकजनाको शरिरबाट भाइरस लिइएको थियो । यो भाइरसलाई दुईवटा अलग`अलग ट्युवमा भरियो । छुट्टाछुट्टै परिवेशमा यसको तापक्रम बढाइयो ।
तर सफा वातावरणमा उच्च तापक्रममा यो भाइरस नि`ष्क्रिय भएको पाइयो । तर फोहोर वातावरणमा यो अझै सक्रिय नै रहेको पाइयो । तर ताप`क्रम बढ्दै जाँदा यसको शक्ति कमजोर हुँदै गएको भने देखियो । ७० डि`ग्री से`ल्सियत तापक्रममा यो भाइरस ५ मिनेटका लागि नि`ष्क्रिय भएको पाइयो । तर सो समयपछि भाइरस पुनः सक्रिय हुन सुरु भयो । तर, वैज्ञानिकहरु उच्च तापक्रमबाटै यो भाइरस नि`ष्क्रिय गर्न सकिने नि`ष्कर्षमा भने पुगेका छन् । उनीहरुका अनुसार ९२ डि`ग्री से`ल्सियस (१९७ डि`ग्री फरे`नहाइट) तापक्रममा १५ मिनेट राख्दा भाइरस नि`ष्क्रिय हुन्छ । तर त्यो तापक्रम विश्वको कुनै पनि ठाउँमा पुग्दैन ।
उम्लिएको पानी १०० डि`ग्रीको हुन्छ तर त्यो पानीलाई मान्छेले सहन गर्न सक्दैन । यो अनुसन्धानपछि वैज्ञानिकहरुले सार्स रोग र कोरोना भाइरस उस्तै प्रकृतिको भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । यो अनुसन्धान अहिलेसम्म जर्नलमा प्रकाशित भइसकेको छैन । प्रारम्भिक निश्कर्षलाई अध्ययनमा संल`ग्न नभएका अन्य वैज्ञानिकहरुको टोलीले गहनतापूर्वक पुनः परीक्षण गरेपछि मात्रै यसलाई जर्नल`मा प्रकाशित गरिनेछ ।